ကွန်ပျူတာ အသုံးများလို့ မျက်လုံးအားစိုက်ရတာ မများရလေအောင် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကွန်ပျူတာ အသုံးများလို့ မျက်လုံးအားစိုက်ရတာ မများရလေအောင်
အခုခေတ်က ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေများတော့ ကွန်ပျူတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးဒဏ်ဖြစ်တာတွေ များလာပါတယ်။ ဒီလို မျက်လုံးအားစိုက်ရတာ များတဲ့အခါမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာမယ်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း ကျလာပြီးတော့ အမှားတွေ များများလုပ်မိတာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ မျက်လုံး ခဏခဏပိတ်တာ၊ မျက်လုံးတွေ နီတာမျိုးတွေအထိပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> ရုံးအလုပ် လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက် ဒီလိုပြဿနာတွေကို သက်သာစေမယ့် အချက် (၁၀) ချက်ကတော့ -
1. မျက်လုံးကို သေချာစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အမြင်အာရုံပြသနာတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် မျက်လုံးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရသူတွေက ကွန်ပျူတာသုံးပြီး အလုပ်စမလုပ်ခင်မှာ တစ်ခါ မျက်စိစစ်ဆေးမှုခံယူထားကာ ပြီးရင်တော့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုခံယူတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးဆရာဝန်ကို ကွန်ပျူတာကို အလုပ်မှာ၊ အိမ်မှာ ဘယ်လောက်အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့ ကွန်ပျူတာအကွာအဝေးတွေကို တိုင်းသွားပြီးတော့ ပြောပြပေးပါ။
2. သင့်တင့်တဲ့အလင်းရောင် ရှိပါစေ။
အပြင်ကဝင်လာတဲ့ အလင်းစူးစူးတွေ (သို့) အတွင်းက မီးအလင်းရောင်က တောက်လွန်းတာတွေကြောင့် မျက်လုံးအားစိုက်ရတာကို များစေပါတယ်။ တကယ်တော့ ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှာ ရှိသင့်တဲ့အလင်းရောင်က ရုံးအတော်များများမှာ တွေ့ရတဲ့အလင်းရောင်ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အပြင်က အလင်းဝင်တာ နည်းသွားစေဖို့အတွက် လုက်ကာ၊ အလင်းကာတွေချပြီး ကွယ်ထားပါ။ အတွင်းမှာလည်း အရမ်းလင်းတဲ့ မီးချောင်းတွေ မထွန်းပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက ပြတင်းပေါက်ရှေ့ (သို့) နောက်တွေမှာမထားဘဲ ဘေးတိုက်အနေထားဖြစ်အောင် ထားပါ။
ရုံးမှာဆိုရင်လည်း ခေါင်းပေါ်က မီးချောင်းတွေကို ပိတ်ထားပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အလင်းတိုက်ရိုက်မကျတဲ့ မီးချောင်းတွေကိုပဲ ထွန်းပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။
3. အလင်းပြန်တာတွေ၊ အလင်းစူးစူးတွေကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေ။
နံရံတွေပေါ်က အလင်းစူးစူးတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်က အလင်းပြန်တာတွေကလည်း မျက်လုံးအားစိုက်ရတာ များပြီးတော့ ဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှာ အလင်းမပြန်နိုင်တဲ့ screen တပ်ထားတာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ရင်လည်း အရမ်းတောက်တဲ့ အဖြူရောင်နံရံတွေအစား ပိုပြီးမှောင်တဲ့ အရောင်ခြောက်ခြောက်သုတ်ပါ။ မျက်မှန်တပ်ရင်လည်း anti-reflective (AR) လို့ခေါ်တဲ့ အလင်းမပြန်တာထည့်ထားတဲ့ မှန်တပ်ပါ။
4. သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို အဆင့်မြှင့်ပါ။
Laptop တွေမှာ သုံးတဲ့ LCD ဆိုတဲ့ မျက်နှာပြင်အပြားအမျိုးအစားကို ပြောင်းသုံးပါ။ ဒါတွေက မျက်လုံးအတွက် ကောင်းပြီးတော့ အလင်းပြန်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး resolution အမြင့်ဆုံးဖန်သားပြင်ကို သုံးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက desktop ကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဆိုရင် မျက်နှာပြင်အကျယ် အနည်းဆုံး ၁၉ လက်မလောက်ရှိတာကို သုံးပါ။
5. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာပေါ်က display settings တွေကို ညှိပါ။
အောက်ပါ display settings တွေကိုညှိပေးခြင်းက မျက်လုံးအားစိုက်ရတာကို လျော့စေနိုင်ပါတယ်။
• Brightness - ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်က အလင်းရောင်က ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ့အထိ ညှိပေးဖို့ လိုပါတယ်။ စစ်ကြည့်တဲ့နေနဲ့ website တစ်ခုရဲ့ နောက်ခံအဖြူကို ကြည့်လိုက်လို့ အလင်းရောင်ထွက်နေရင် ဒါက မျက်နှာပြင် တောက်လွန်းနေပါတယ်။ မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေပြန်ရင်လည်း မှောင်လွန်းပါတယ်။
• Text size and contrast - စာလုံးအရွယ်အစားတွေနဲ့ contrast တွေကိုလည်းကြည့်လို့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ စာတွေအများကြီးရေးရရင် သေချာဂရုစိုကပေးဖို့ လိုပါတယ်။
• Color temperature - ဒါကတော့ အရောင်တွေကနေ ထွက်လာတဲ့ မြင်သာတဲ့အလင်းရောင်စဉ်တွေကို သုံးတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာစကားလုံးပါ။ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်က color temperature ကို လျှော့ချထားခြင်းအားဖြင့် မျက်လုံးအားစိုက်ရတာကို များစေတဲ့ blue light တွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Microsoft windows operation system ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုရင် Control Panel မှာ display setting ချိန်လို့ ရပါတယ်။ Apple ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ Finder - Application folder - Systems Preferences - Display setting မှာ ပြင်လို့ရပါတယ်။
ဖန်သားပြင်ပေါ်က စာလုံးအရွယ်အစားကို ဘယ်လောက်ထားသင့်သလဲဆိုရင် ပုံမှန်ကြည့်နေကျပုံစံကနေ မြင်နိုင်တဲ့ အသေးဆုံးစာလုံးအရွယ်အစားရဲ့ ၃ ဆ ရှိသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အရောင်အနေအထားကတော့ အဖြူနောက်ခံမှာ အမည်းစာလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
6. မကြာခဏ မျက်တောင်ခတ်ပေးပါ။
မျက်တောင်ခတ်ခြင်းက မျက်လုံးကို စိုစွတ်စေပြီးတော့ မျက်လုံးခြောက်ခြင်းနဲ့ ထိခိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ မျက်တောင်ခတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ မျက်တောင်ခတ်ဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ မျက်တောင်မခတ်ရင် မျက်လုံးမှာရှိတဲ့မျက်ရည်တွေက အငွေ့ပြန်လွယ်ပြီးတော့ မျက်လုံးခြောက်မြန်စေပါတယ်။
မျက်လုံးတွေ အရမ်းခြောက်နေရင် artificial tears လို့ခေါ်တဲ့ မျက်ရည်တုဖန်တီးပေးတဲ့ မျက်စဉ်းခပ်လို့ရပါတယ်။ မျက်လုံးတွေရဲလို့ ခတ်ရတဲ့မျက်စဉ်းနဲ့ မတူပါဘူးနော်။
ကွန်ပျူတာသုံးနေစဉ်မှာ မျက်လုံးခြောက်တာကို သက်သာစေဖိုပအတွက် မိနစ် ၂၀ တစ်ကြိမ် မျက်လုံးလေးတွေကို အိပ်ပျော်သွားသလိုမျိုး ဖြည်းဖြည်းလေးပိတ်ပြီးတော့ မျက်တောင် ၁၀ ကြိမ်လောက် ခတ်ပေးပါ။ ဒါက မျက်လုံးလေးတွေကို ပြန်စိုလာစေပါလိမ့်မယ်။
7. မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။
မျက်လုံးကို ဒဏ်ဖြစ်စေတဲ့ နောက်ထပ်တစ်ချက်က တစ်ခုခုပေါ်မှာ အရမ်းအာရုံစိုက်ပြီး ကြည့်ရလို့ မျက်လုံးညောင်းလာတာပါ။ ဒါကိုလျော့ကျစေဖို့အတွက် မိနစ် ၂၀ ကြာရင်တစ်ကြိမ် ကိုယ်နဲ့ ပေ ၂၀ အဝေးမှာရှိတဲ့အရာကို စက္ကန့် ၂၀ လောက် ကြည့်ပေးပါ။ ဝေးဝေးကို ကြည့်ပေးတာက မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ အာရုံစိုက်ရတဲ့ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။
နောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့ အဝေးကအရာတစ်ခုကို ၁၀-၁၅ စက္ကန့်လောက် စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ အနီးမှာရှိတဲ့အရာကို ၁၀-၁၅ စက္ကန့်လောက် တစ်ခါပြန်စိုက်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အဝေးကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုမျိုး ၁၀ ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်း ၂ မျိုးစလုံးက ကွန်ပျူတာကြောင့် မျက်လုံးအားစိုက်ရများတာကို သက်သာစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုပဲ မျက်တောင် မကြာခဏခတ်ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
8. မကြာခဏ နားပေးပါ။
ကွန်ပျူတာနဲ့ အကြာကြီး အလုပ်လုပ်ရလို့ဖြစ်တဲ့ အမြင်အာရုံပြသနာတွေ၊ လည်ပင်း၊ နောက်ကျောနဲ့ ပခုံးအကြောတက်တာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် မကြာခဏ အနားယူပေးပါ။
လူအများစုက တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်နေတာကိုမှ ၁၅ မိနစ်စီ ၂ ကြိမ်ပဲ နားလေ့ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလိုနားတာအပြင် ၅ မိနစ်စီ ၄ ကြိမ်လောက် ထပ်ပြီးနားသင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်လေးနားတာက အလုပ်ကိုလည်း အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တဲ့အပြင် နားလိုက်လို့ အလုပ်လုပ်တဲ့နှုန်းက ပိုတောင်မြန်လာပါသေးတယ်။
နားတဲ့အချိန်မှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီးတော့ အနားဝန်းကျင်မှာ လမ်းလျှောက်၊ အကြောလျှော့ပါ။ အချိန်တိုတွင်းမှာ အကြောတွေ ပြေလျော့စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့် (သို့) အားကစားနည်းပြဆရာကို မေးလို့ရပါတယ်။
9. ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို ပြင်ဆင်ပါ။
စာကြည့်ပြီးရိုက်ရတဲ့စာရွက်နဲ့ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ နောက်ကိုကြည့်လိုက် ရှေ့ကိုကြည့်လိုက် လုပ်နေရရင် မျက်လုံးဒဏ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စာရွက်ကို ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင် ဘေးနားလေးမှာ ထောင်ထားပါ။
အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမမှန်ရင်လည်း အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလုပ်လုပ်တဲ့စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်ကို အမြင့်အဆင်ပြေအောင် ညှိထားပါ။ မျက်လုံးနဲ့ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်က ၂၀-၂၄ လက်မ အကွာအဝေးမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လည်ပင်းနဲ့ခေါင်းတွေ ပုံစံမှန်ဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်အလယ်ခေါင်က မျက်လုံးရဲ့အောက် 10-15° မှာ ရှိသင့်ပါတယ်။
10. ကွန်ပျူတာသုံးရင် မျက်လုံးသက်သာစေမယ့် မျက်မှန်တပ်ပါ။
မျက်စိဆရာဝန်ကို ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် မျက်မှန်မျိုး ညွှန်ကြားပေးဖို့ ပြောပါ။ မျက်ကပ်မှန်တွေတပ်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာသုံးရင် မျက်လုံးပိုခြောက်ပြီးတော့ အမြင်အာရုံပြဿနာတွေကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။